ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအစီစဉ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပီဟုဆို။ ~ Htet Aung Kyaw
ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးအစီစဉ် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပီဟုဆို။
သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်သော ထားဝယ်သားများ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြသ။
(ထားဝယ် သတင်းစဉ်မှ- ၀၄-၀၁-၂၀၁၂)
တနသာင်္ရီတိုင်း ထားဝယ်ခရိုင် မောင်းမကန်ကမ်းခြေဖက်မှ ၀င်လာသောသတင်းတရပ်အရ ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ထားဝယ်သူ ထားဝယ်သား ၂၀၀-ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြသ ပွဲတခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ထားဝယ် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ စီမံကိန်းကို တားမြစ် ဆန္ဒပြနေသူများ (ဓာတ်ပုံ - AFP)
မောင်းမကန် ကမ်းခြေနဲ့ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းဒေသကျေးရွာတချီု့မှာပြလုပ်တဲ့ အဲဒီဆန္ဒပြပွဲကို Green Development လှုပ်ရှားမှုလို့အမည်ပေးထားပီး နဘုလယ်ဒေသမှာဆောက်လုပ်မဲ့ မဂါဝပ် ၄၀၀၀-ရှိ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ နဲ့ ညစ်ထေးစက်မှုဇုန် တည်ဆောက်မှုကို ကန့်ကွက်တာလို့ ထားဝယ်လူငယ်တဦးကပြောပါတယ်။
ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်နေသော ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေဇုန် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သည့် ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်မည့် အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း
အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုးက ယနေ့ ပြောကြားခဲ့သည်။
Open lett er to Yingluck Shinawatra by Dawei Development Assicoation
Saturday at 9:48am, 07-01-12
Today, local people from Dawei and Dawei Development Association wrote an open letter addressing to Yinluck Shinawatra, Prime Minister of Thailand and gave this letter to5ministers of Thailand who visited Dawei on7January 2012.Concerns of Dawei people regarding with environmental impacts and human rights situation due to Dawei Deep Seaport and Special Industrial Zone project are mentioned in this letter. And they ask Thai government to ensure Thai companies working outside Thailand respect human rights.
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လခ် အားလိပ်မူ၍ ထားဝယ်ဒေသခံ နှုင့် ထားဝယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ကို တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသော ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာန (၅) ခုမှ ၀န်ကြီးများအား ယနေ့ ပေးအပ်ပါသည် ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွင် ထားဝယ်ဒေသခံတို့၏ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် စက်မှုဇုံ စီမံကိန်းအပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြ ထားသည့်အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံပြင်ပတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ထိုင်းကုမ္မဏီများအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး စံချိန်စံညွှန်းများကို လေးစာလိုက်နာအောင် ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် တာဝန်ယူသင့်ကြောင်းပါဝင်ပါသည် ။
ထားဝယ် ၄-မြိုနယ် NLD ပါတီဝင်များ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခန်းနားကျင်းပ
တနသာင်္ရီတိုင်း ထားဝယ်ခရိုင် လောင်းလုံးမြိုမှ ၀င်လာတဲ့သတင်းတရပ်အရ ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့အခန်းနားတရပ်ကို ထားဝယ် ၄-မြိုနယ်မှ NLD ပါတီဝင်တွေစုပေါင်းပီး လောင်းလုံမြိုမှာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
လောင်းလုံးမြို NLD ရုံမှာကျင်းပတဲ့ အဲဒီအခန်းနားကို မနက် ၉-နာရီခွဲကနေ ၁၁-နာရီခွဲအထိ ၂-နာရီကြာ ကျင်းပပြီး လောင်းလုံ။ ထားဝယ်။ သရက်ချောင်းနဲ့ ရေဖြူမြိုနယ်တွေက NLD ပါတီဝင်တွေ။ စိတ်ဝင်စားသူ ၂၀၀-ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့အခန်းနားနဲ့အတူ ပါတီအမှတ်တံဆိပ်ပါ အမှတ်တရပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း နဲ့ လောင်းလုံးမြိုနယ် လွတ်လပ်အမတ်နေရာအတွက် NLD အမတ်လောင်းအမည်စာရင်းနဲ့ပါတ် သက်ပီး ဒေသခံပါတီဝင်တွေရဲ့အမြင်တွေကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့လဲ အဆိုပါ လူငယ်ကပြောပါတယ်။
သူသိသလောက်အချက်တွေအရ ပါတီဝင်အားလုံးနီးပါးကနေ တနသာင်္ရီတိုင်း NLD ပါတီ အတွင်းရေးမှုး ကိုအောင်စိုး ကို ကန့်ကွက်သူမရှိအဆိုပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီအမြင်ကို ပါတီ ဗဟိုဆီပေးပို့လိုက်ပီ လို့လဲ သူကဆိုပါတယ်။
အစောပိုင်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင် လောင်းလုံးအတွက် အမတ်နေရာကို ဗဟိုက သတ်မှတ် ပေးမယ်လို့သိရပီး ကျွန်းစုအတွက် အမတ်နေရာကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစု ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း ၀င်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
တနသာင်္ရီတိုင်းအတွက် ပြည်သူ့လွတ်တော်အမတ် လွတ်လပ်နေရာ ၂-ခုရှိနေပီး လောင်းလုံနဲ့ ကျွန်းစုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် တနသာင်္ရီတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးခင်ဇော်ကို တာဝန်ကအနားပေးတာ အတည်ဖြစ်ရင် တိုင်းဒေသကြီးအတွက် အမတ်နေရာတခုလဲ ထပ်လွတ်လပ်လာဘွယ်ရှိနေတယ် လို့ ဒေသခံ တွေကပြောပါတယ်။
ဒီနေရာတွေအပါဝင် တနိုင်ငံလုံးအတွက် လွတ်လပ်အမတ်နေရာ ၅၀-နီးပါးအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲတွေကို လာမဲ့ ဧပြီလ ၁-ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေငြာထားပါတယ်။ ၂၀၁၀-ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာ အခု တကြိမ်ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င် ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ကြေငြာထားပီး ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ကော့မှုး မဲဆန္ဒနယ်ကနေ ၀င်ပြိုင်မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ထား​ဝယ်​ကျောက်မီး​သွေး​စက်ရုံအ​ကြောင်း​ ​မောင်း​မကန်တွင် ​ဒေသခံကို အသိ​ပေး​ပွဲလုပ်
Published on January 4, 2012 by ရွှေအာင်။ DVB
ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ တည်​ဆောက်​ရေး​မှာပါဝင်တဲ့​ ​ကျောက်မီး​သွေး​စက်ရုံနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ​ဒေသခံပြည်သူ​တွေကို အသိ​ပေး​တဲ့​ လှုပ်ရှား​မှုတခု ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် လွတ်လပ်​ရေး​နေ့​မှာ ပြုလုပ်ခဲ့​ပါတယ်။
ဒေသခေံတွကို အသေိပး လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်စဉ်။
ထား​ဝယ်​ဒေသက နာမည်​ကျော် ​မောင်း​မကန်ကမ်း​ခြေမှာ ဒီ​နေ့​ မနက်ပိုင်း​က ပြုလုပ်ခဲ့​တာဖြစ်ပြီး​ ​ဒေသခံ ၂၀၀ ​ကျော် တက်​ရောက်ခဲ့​ကြတယ်လို့​ လှုပ်ရှား​မှုကို ဦး​ဆောင်ပြုလုပ်တဲ့​ ထား​ဝယ်​ဒေသဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​အဖွဲ့​က တာဝန်ရှိသူတဦး​က ​ပြောပါတယ်။သူတို့​အဖွဲ့​ရဲ့​ ဒီ​နေ့​လုပ်​ဆောင်မှုနဲ့​ ​ဒေသခံ​တွေရဲ့​ သ​ဘောထား​ကို သူက ခုလို ​ပြောပါတယ်။
“​ကျောက်မီး​သွေး​စက်ရုံ လာလုပ်မယ်။ သူတို့​ အဲဒါ လုပ်မယ့်​အ​ကြောင်း​၊​ ပြီး​ရင် ​ကျောက်မီး​သွေး​စက်ရုံက​နြေပီး​တော့​ ​ဘေး​ထွက်ဆိုး​ကျိုး​တွေ ဘယ်လို ရှိတယ်။ သိသင့်​တဲ့​ဟာ​တွေ​ပေါ့​ဗျာ။ အဲဒါကို ကျ​နော်တို့​ လူ​တွေကို သူတို့​ သိသင့်​သိထိုက်တဲ့​ message (သတင်း​) ​တွေ​ပေါ့​။ သူတို့​အ​နေနဲ့​ ပြန်စဉ်း​စား​ပေါ့​။ အဲဒါကို လက်ခံသင့်​ကြောင်း​၊​ လက်မခံသင့်​ကြောင်း​ အဲဒီအတွက် ကျ​နော်တို့​ ​ပေး​တယ်။ ပြီး​ရင် အဲဒါနဲ့​ ပတ်သက်ပြီး​ ​ဒေသခံ​တွေရဲ့​ သ​ဘောထား​ကို လက်မှတ်ထိုး​ လှုပ်ရှား​မှု လုပ်ပြီး​ ပြန်ပြီး​တော့​ ယူတယ်။ အခု သူတို့​က အဲဒါကို တကယ်လာမှာလား​ပေါ့​၊​ တကယ်လာရင် ငါတို့​က ဘယ်လိုလက်ခံရမလဲဆိုပြီး​ စိတ်ထဲက​တော့​ နည်း​နည်း​ ​ရှော့​ဖြစ်သွား​တာ​ပေါ့​။”
ကျာက်မီး​သွေး​စက်ရုံ တည်​ဆောက်ဖို့​ဖြစ်လာတဲ့​ အ​ကြောင်း​ရင်း​တွေ၊​ တည်​ဆောက်ဖြစ်ရင် ဖြစ်​ပေါ်လာနိုင်တဲ့​ ဆိုး​ကျိုး​တွေကို အဖွဲ့​ဝင်အချင်း​ချင်း​ မျှ​ဝေ​ပြောပြတာနဲ့​ လက်ကမ်း​စာ​စောင်​တွေ ဖြန့်​ချိတာ​တွေလည်း​ လုပ်​ဆောင်ခဲ့​ကြတယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။ထား​ဝယ်​ဒေသ ဖွံ့​ဖြိုး​တိုး​တက်​ရေး​အဖွဲ့​က ဦး​ဆောင်ပြီး​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​ဒီဇင်ဘာထဲမှာ ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ တည်​ဆောက်​ရေး​အ​ပေါ် ​ဒေသခံ​တွေရဲ့​ သ​ဘောထား​ကို ရန်ကုန်မှာ သတင်း​စာရှင်း​လင်း​ပွဲ လုပ်ခဲ့​ပါ​သေး​တယ်။
အဲ့​ဒီသတင်း​စာရှင်း​လင်း​ပွဲ ပြီး​တဲ့​နောက်မှာလည်း​ ထိုင်း​နိုင်ငံက မက်တဖွတ် (Map Ta Phut) စက်မှုဇုန်ကို သွား​ရောက် ​လေ့​လာခဲ့​ကြပီး​ အဲ့​ဒီက​တွေ့​ရှိလာတဲ့​ ​ဘေး​ထွက်ဆိုး​ကျိုး​တွေကိုလည်း​ ဒီ​နေ့​မှာ တဆင့်​ မျှ​ဝေခဲ့​ကြပါတယ်။ထား​ဝယ်​ဒေသခံ​တွေရဲ့​ သ​ဘောထား​တွေ ​ဖော်ထုတ် သိရှိပြီး​ရင်​တော့​ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်း​အစိုး​ရအဖွဲ့​နဲ့​ သမ0x081မတထံ စာ​ရေး​တင်ပြဖို့​ ရှိတယ်လို့​ သိရပါတယ်။ထား​ဝယ်​ရေနက်ဆိပ်ကမ်း​ စီမံကိန်း​မှာပါဝင်တဲ့​ မဂ0x081ဂါဝပ် ၄၀၀၀ ထုတ်လုပ်မယ့်​ ​ကျောက်မီး​သွေး​ ဓာတ်အား​ပေး​စက်ရုံဟာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု တနှစ် တန်သန်း​ ၃၀ ရှိနိုင်ပြီး​ ထိုင်း​တနိုင်ငံလုံး​ ထုတ်လွှတ်မှုရဲ့​ ထက်ဝက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့​အြပင် စက်ရုံက ထွက်ရှိလာမယ့်​ ဓာတ်​ငွေ့​တွေ​ကြောင့်​လည်း​ လူနဲ့​ ပတ်ဝန်း​ကျင်တို့​ ထိခိုက်ပျက်စီး​နိုင်တယ်လို့​ ​လေ့​လာမှု စစ်တမ်း​တခုအရ သိရ​ကြောင်း​ ပြီး​ခဲ့​တဲ့​အပတ်ထုတ် ဝီး​ကလီအဲလဗင်း​ဂျာနယ်မှာ ​ဖော်ပြထား​ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်လို့ အခု ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းဒေသဆီပြောင်း မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ကျောက်မီးသွေးမိုင်း စီမံကိန်း-အကြောင်း။ ရုပ်-သံ မှတ်တန်း။
No Road Without Impact Assessment, KNU Tells Ital-Thai
By LAWI WENG Wednesday, January 4, 2012, The Irrawaddy.
A sign near Tavoy in Tennaserim Division—the site ofaplanned special economic zone and deep-sea port—shows the road leading to Thailand. (Photo: Reuters)
The Karen National Union (KNU) told representatives of the Italian-Thai Development Co., Ltd. (ITD) atameeting on Dec. 28 that it will only allow construction ofanew road linking Burma’s Tavoy Special Economic Zone to the Thai border to go ahead after an environmental impact assessment has been carried out.
Speaking to The Irrawaddy on Wednesday, Saw Tah Doh Moo, the secretary of the KNU environmental committee, which met the ITD delegation, said: “They told us they want to do the road project, and we told them they need to complete an assessment first.”
The KNU wants ITD to show how much impact the road project, which passes through KNU-controlled territory, will have on the environment and local communities. The road is being built by ITD as part of the multi-billion-dollar Dawei Development Project, which aims to turn Tavoy intoamajor transport and manufacturing hub.
“We need an assessment of the environmental impact in order to find the best solution for local people. There is nothing to say if they complete the assessment,” said Saw Tah Doh Moo.
ITD has long sought an opportunity to discuss the road with the KNU, amid concerns about security that could forceasuspension of the project unless it receivesagreen light from the ethnic armed group.
At the meeting, the ITD representatives promised that the company would complete an assessment that is already underway and report its findings to the KNU. The two sides agreed to meet again when the process was completed.
In September, the KNU forced the company to stop work on the road after villagers voiced concerns that that the project would haveanegative impact on the environment and that many thousands of local villagers from more than 20 villages would be forcibly evicted from their homes.
Thailand plans to turn Tavoy's deep-sea port intoamassive industrial complex that will provide Burma's more economically advanced neighbor withaready supply of imported energy resources andanew conduit for its exports. The area will be administered asaSpecial Economic Zone (SEZ) under an agreement reached between Burma and Thailand in May 2008.
However, rights groups say the project, which is still in the planning stages, has led toagovernment policy of land confiscation and forced relocation of local people. Environmentalists have also been strongly opposed to the project, which is expected to inflict major damage to the area's pristine coastline.
ITD is Thailand's largest construction company. The company's chairman, Premchai Karnasuta, told reporters in Bangkok on Dec. 26 that it expects to sign loan agreements in 2012 valued at US $12.5 billion from the Japan Bank for International Cooperation to develop the $60 billion project, which includesadeep-sea port,a250-square-kilometer light and heavy industrial zone,a4,000-megawatt coal-fired power plant, and road and railways links to the Thai border.